'तीज गीतमा नचाएर गाडी किन्न पुग्छ '
रामकला खड्का शुक्रवार, असार ३०, २०७४ 18445 पटक पढिएको
लोकदोहोरी म्युजिक भिडियोमा वर्षांैदेखि एकछत्र राज गर्दै आएका छन् शंकर बीसी । नजिकिँदै गएको तीजका कारण उनी हिजोआज व्यस्त छन् । यो सिजनमा मात्रै तीजका ५० म्युजिक भिडियो कोरियोग्राफी गरिसकेका शंकरका काठमाडौंमै अझै १० वटा जति गीतहरू लाइनमै छन् । काठमाडौंमा काम सकाएर सबभन्दा गुल्मी जाने उनको योजना छ । त्यहाँ करिब पाँचवटा गीतमा नृत्य निर्देशन गरेर बुटवल, पोखरालगायतका सहरमा ७० भन्दा बढी गीतमा कोरियोग्राफी गर्नु पर्ने उनको तालिकामा रहेको छ ।
आफ्नो गाउँको एउटा प्राविमा दुई कक्षामा पढ्दा भएको नृत्य प्रतियोगितामा भाग लिएर सान्त्वना पुरस्कार पाएपछि उनी बिहे, पूजा र सांस्कृतिक कार्यक्रममा नृत्य गर्न जान थालेका हुन् । माध्यमिक स्कुलमा पढ्दा पनि जिल्लास्तरीय नृत्य प्रतियोगितामा उनको विद्यालयले प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो । त्यसपछि उनी जिल्ला, क्षेत्र हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुगेका हुन् । २०४७ सालमा उनी पहिलो पटक काठमाडौं आएर राष्ट्रिय नाचघरमा नाचेका थिए ।
एसएलसी दिएपछि उनी सीएमए पढ्न सुर्खेत गए । त्यतिबेला नेपालगन्जमा मौसमी मल्लले अभिनय गरेको चलचित्र 'शत्रु'को छायांकनमा कमल राईले नृत्य सिकाइरहेका उनले देखे । त्यो देखेर उनलाई पनि यही क्षेत्रमा लाग्ने रहर जाग्यो । त्यसपछि आफूसँग भएको १२ सय रुपैयाँ, दुईतीन जोर लुगा र एउटा कालो ब्याग लिएर उनी २०५१ सालमा काठमाडौं आए ।
कामना पत्रिकाको पछाडिपट्टि दिइएको एउटा विज्ञापनमा हेरेर उनले कमल राईको डान्स सेन्टर पत्ता लगाए । त्यहाँ गएर नृत्यप्रतिको आफ्नो चाह सुनाएपछि उनले त्यहाँ भर्ना पाए । यही क्रममा उनलाई कोरसमा नाच्ने अवसर आयो । पहिलो दिन चलचित्र छायांकन भइरहेको ठाउँमा पुगेपछि उनले नायक राजेश हमाललाई हेरेको हेरै भएको अझै बिर्सेका छैनन् । यसरी नै उनले ७० भन्दा बढी चलचित्रमा कोरसमै नृत्य गरे ।
दिलीप रायमाझी, सुशील क्षेत्रीलगायतका कलाकार पनि उनीसँगै कोरस नाच्थे । चलचित्र 'परेली'मा वसन्तजंग रायमाझी र पछि गएर कमल राईसँग पनि एसिस्टेन्ट गर्ने उनले मौका पाए । नायक बन्ने उनको सपना भएकाले उनले नारायण पुरीको एउटा चलचित्रमा साइन पनि गरेका थिए । तर संकटकालले गर्दा त्यो चलचित्र निर्माण हुन सकेन । तर दोहोरीमै उनको परिचय बन्नु थियो र होला, शंकरलाई दोहोरीको अफर आयो । त्यो गरिसकेपछि त पर्सिपल्ट अर्को, अनि अर्को गर्दै गीतका लाइन लाग्न थाले र उनले गरेका 'सुपारी चाम्रो', नजाउ सानु' जस्ता गीत एकदम हिट पनि भए ।
यही क्रममा उनले 'फस्ट लभ' नामक चलचित्रमा कोरियोग्राफी गर्ने अवसर पनि पाए । योसँगै 'कसलाई दियो जोवन', 'लंका'लगायतका धेरै चलचित्रमा गरेर उनले अवार्डसमेत हात पारेका छन् । आजसम्मको सांगीतिक यात्रामा कहिल्यै धैर्य नगुमाउनु नै आफ्नो सफलताको रहस्य रहेको उनले बताए । सधंै कोरसमा नाच्दा पनि एक दिन म पहिलो नम्बरमा हुन्छु भन्ने आत्मविश्वास उनमा थियो । यही विश्वासले उनलाई आज लोकदोहोरी गीतमा व्यावसायिक रूपमा सबैभन्दा सफल र सन्तुष्ट व्यक्ति बनाएको छ ।
आजसम्मको यात्रामा उनले चार हजारभन्दा बढी गीतमा नृत्य निर्देशन गरिसकेका छन् । यीमध्ये १७ सय जतिमा त आफैंले नाचेका पनि छन् । करिब ९२ वटा चलचित्रमा कोरियोग्राफी गरिसकेका शंकरका पछिल्ला चलचित्रमा 'बितेका पल', 'वडा नम्बर ६', 'कैदी' आदि पर्छन् । आफू नाच्नुभन्दा पनि कोरियोग्राफी गरेर अरूलाई नचाउँदा उनलाई रमाइलो लाग्छ । हालसम्म उनले थुप्रै मोडललाई नचाइसकेका छन् । तर यीमध्ये पनि सबै मोडलमा आआफ्नै क्षमता रहेको उनले बताए ।
शंकरको नजरमा मोडल
पार्वती राई, नृत्यमा फिनिसिङ राम्रो छ
अञ्जली अधिकारी, हेर्दा राम्री छ
करिश्मा ढकाल, एक्सप्रेसन राम्रो छ
रीना थापा, लोकनृत्य राम्रो छ
रञ्जिता गुरुङ, अभिनय पक्ष राम्रो छ
रश्मी तामाङ, ड्रेसअपमा बढी कन्सियस छ
आरसी मगर, मोर्डन र बेली डान्स राम्रो छ
तीजका गीतमा लोकसहित आधुनिक र बेली सबै दर्शकले मन पराउने उनको बुझाइ छ । बजारमा आउने नयाँ गीतमा भल्गरभन्दा पूरै छोप्ने लुगा लगाएका ग्ल्यामरस नै दर्शकले मन पराउने उनले बताए । 'नेपाली कला संस्कृति पनि झल्कियोस्, आधुनिकपन पनि आओस्, दर्शकले यस्तै गीत रुचाउँछन् आजभोलि', उनले भने । गीतको छायांकन नभएको बेलामा उनी कमलादीस्थित आफ्नो कृष्ण फिल्म डान्स सेन्टरमा नृत्य सिकाउन पनि जान्छन् । नाच्ने र नचाउनेबाहेक उनको शौक गायन र गीत लेखन पनि हो । उनले चलचित्र 'वर्षात्'मा जिन्दगीको लामो यात्रा गीत नायिका रेखा थापासँग गाएका पनि छन् । त्यसैगरी भ्याएसम्म बिहान फुटसलमा गएर फुटबल खेल्ने गरेका शंकरले भने, 'कलाकार टिमको प्रतियोगिता हुँदा प्रायः गोल हान्ने मै हुँ ।'
उनका अनुसार तीजकै सन्दर्भ पारेर गीत निकाल्ने नयाँ कलाकार अहिले बजारमा धेरै छन् । पोहोरको तुलनामा यसपालि धेरैले 'लालुमई', 'दूरबिन लाईलाई हेर मायालु'लगायतका पुराना भाकाहरू समातेर गीत निकालेका उनले बताए । गीतको भाका पुरानो भए पनि त्यसलाई नयाँ प्रविधिसहित रेकर्ड गरिएका हुनाले आधुनिकपन पनि झल्कने गरेको छ । कुनै पनि एउटा गीतको छायांकनका लागि न्यूनतम ७५ हजारदेखि एक लाखसम्म पर्ने गरेको छ । यस वर्ष तीजमा करिब ६ सय वटा भिडियो बन्दै भएकाले बजारमा करिब ६ करोडबराबरको कारोबार हुने उनको ठम्याइँ छ ।
त्यसो त नृत्य निर्देशक शंकरको कमाइ पनि कम हुँदैन । यही तीजकै गीतमा अरूलाई नचाएर एउटा कार किन्न पुग्ने पैसा कमाइने उनले बताए । यस क्षेत्रमा लागेर आफू व्यावसायिक रूपमा पूर्ण सफल र सन्तुष्ट रहेको बताउने शंकरले भने 'खै कलाकारितामा कमाइ हुँदैन भनेर कसरी भनुँ, मैले नाचेरै काठमाडौंमा दुईटा घर र गाडी किनिसकेँ । ' तर यो ठाउँसम्म पुग्नलाई समय भने लाग्ने उनको भनाइ छ ।
शुक्रवार, माघ ५, २०७४ किताब पढ्नुहुन्छ ?
शुक्रवार, माघ ५, २०७४ कसरी बित्छ विकेन्ड ?
शुक्रवार, माघ ५, २०७४ सेयुङ : एक ‘फकिर’ कोरियाली
शुक्रवार, माघ ५, २०७४ जहाँ देखिन्छ जीवनको तस्बिर
शुक्रवार, माघ ५, २०७४ विराटलार्इ फापेकी अनुष्का
शुक्रवार, माघ ५, २०७४ ट्याटुका कथाव्यथा
शुक्रवार, पुस २८, २०७४ हिम्मतवाली पत्रकार
मधेसी नेताद्वारा बलिदानीको बेवास्ता 242
धनकुटामा 'निषेधाज्ञा' र 'आमहड्ताल' जारी 926
यस्तो हुनुपर्छ प्रदेश सरकारको नेतृत्व 365
डेढ लाख सेवाग्राहीले अझै पाएनन् ‘स्मार्ट कार्ड’ 112
सुमोको ठक्करबाट एकको मृत्यु 144
कालिकोटमा निमोनियाले एकै टोलका तीन शिशुको मृत्यु 138
गुड्दैन फूलमायाको रिक्सा 323
विराटनगरमा व्यवसायीमाथि साङ्घातिक आक्रमण 1031
जिससको भवनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय 343